China VGA 200m extender Suppliers | GreenGo
Mailamailaka Channel Modulator
Raikitra Channel Modulator
Fibre anaty Optical Transmitter
1310nm Fibre Optic Transmitter
1550nm Fibre Optic Transmitter
Ivelany Fibre Optical Transmitter
ivelan'ny trano node
matoantenin'ny atao node
Fibre Cabe sy Accessaries
Mini fitaovana fandefasam-peo
GGE-DE 1550nm Rf Optical T ...
GGE-50ErA 16 seranana High Pow ...
GGE-20EA Series 1550nm Erb ...
GG-16 16 ao amin'ny 1 CATV Hifantohan'ny C ...
FOB Price: US $ 20 - 1000 / Piece
VGA Audio CAT5 / UTP / STP Extender
Ny VGA 200m Audio Extender mampita VGA Video hatramin'ny 1200 tongotra (200m) miala avy amin'ny solosaina mampiasa CAT5 / 5e / 6 tariby. Video tsirairay peo extender ahitana ny vondrona eo an-toerana izay mampifandray ny solosaina, ary koa ny manome lahatsary sy feo ho eo an-toerana mpanara-maso, sy ny vondrona lavitra izay mampifandray ny Monitor.
· Vahaolana lafatra ho an'ny nomerika signage fangatahana.
· Manohana an-toerana sy lavitra VGA mpanaramaso.
· Manohana fanapahan-kevitra ny 1920 × 1080.
· Sharpest ary mazava tsara ny CAT5 VGA / UTP-STP tariby na mpanamboatra.
· Naorina-in tselatra sy misamboaravoara ESD fiarovana.
· Ampiasao in-trano CAT5 / 5e / 6 finday wiring ny toerana misy ny Monitor lavitra.
· Tsy voatery Vesa fitomboan'ny bracket tsy ampy ho an'ny nitombo ny vondrona lavitra ho any aoriana ny iray fisaka tontonana Monitor.
· Local Unit
O Host Connection
O Multiplatform fanohanana: Windows 2000 / XP / Vista / Windows7 / Server 2000/2003/2008, Solaris, Linux, FreeBSD ary MAC OS 9/10.
O Lahy / Vavy 15-Pin HD connector ho an'ny solosaina fifandraisana.
O Tsy voatery Stereo peo fanohanana - 3.5mm Stereo plug.
O Local Access
O Crisp sy mazava 1920 × 1080 lahatsary fanapahan-kevitra.
O Vehivavy 15-Pin HD connector ho an'ny eo an-toerana VGA Monitor.
O Tsy voatery Stereo peo fanohanana - 3.5mm Stereo Jack.
· Remote Unit
O Manohana fanapahan-kevitra hatramin'ny 1920 × 1080; manondro ny vahaolana tabilao etsy ambany ho an'ny fanapahan-kevitra amin'ny halava samy hafa.
O Vehivavy 15-Pin HD connector.
O -Katerena 3.5mm Stereo teny fifandraisana.
· Video Quality Vao mizatra
O Video kalitao fanitsiana ny halava samy hafa ny CAT5 / 5e / 6 tariby natao tanana ho an'ny lahatsary-extender ihany, ary ho azy noho ny feo / lahatsary extender.
O Test Pattern for Cable Length
O Operating hafanana: 32 ° F ny 100 ° F (0 ° C ny 38 ° C).
O Fitehirizana hafanana: -20 ° F ny 140 ° F (-30 ° C ny 60 ° C).
O Operating sy Storage Havana Humidity: 17 - 90% tsy condensing RH.
O WxDxH (MG): 95 * 97 * 28mm (mpandefa)
95 * 97 * 28mm (mpandray)
O Weight (g): 0.9KG
O 220 na 110 VAC amin'ny 50 na 60 Hz alalan'ny AC adaptatera (Anisan'izany).
O Ny fihinana Power: 6W (tsirairay - sy lavitra vondrona eo an-toerana).
O Ampiasao ny PWR-48V-9V0,6A na PWR-12V-9V0,6A DC-DC fahefana mpanova mba hametraka ny rafitra an-toerana ao amin'ny Telecom tontolo iainana.
VGA Audio CAT5 / UTP / STP Extension Mahatsara
Move ny hafatra manerana ny nomerika signage mampiseho
ny farany avy-of-tarika vahaolana ho an'ny dingana farany ao amin'ny nomerika signage setup, ny VGA Audio Extender no haingana, indrindra fomba mahomby hifindra votoaty avy amin'ny haino aman-jery mpilalao aseho.
Previous: VGA 100m extender
Next: VGA 300M extender
VGA 300M extender
VGA 100m extender
Modulator Catv Analog, edfa peo tarika C, EDFA , GG-16MA 16 ao amin'ny 1 Analog CATV Headend mailamailaka modulator, C tarika edfa , edfa fanamafisam-peo ,